Maalinta: Noofambar 6, 2017
Ka jawaab celinta mashruuca baabuurta telefishinka ee Sanliurfa
Wax ka qabashada mashruuca Teleferik ee ay dhisi doonto Dawladda Hoose ee Magaalada Şanlıurfa ayaa sii socota. Magaalada Şanlıurfa, wakiilada ururada aan dawliga ahayn, tiirarka iyo muwaadiniinta ayaa u diidan mashruucan sababa wanaagsan dartood Mashaariicda Nihat Çiftçi inta lagu jiray dowladda hoose ee Karaköprü [More ...]
Antalya 3. 13 kun kun 287 ayaa ka qaybqaatay aftida mashruuca marxaladda marxaladda marxaladda marxaladda
Dimuqraadiyadda ayaa mar labaad ka dhacday shalay Antalya. Aftida Mashruuca 3 Nidaamka Tareenka ee Codbixinta aftida ayaa ah codka dadweynaha ee ugu caansan Antalya oo ay qabato Dawladda Hoose ee ay ku nool yihiin 13 kun oo 287 qof. [More ...]
Qorshaha mustaqbalka ee sanadka 15 ee Samsun
Gaadiidka Magaalada ayaa dabooli doona sanadka xigta ee 15 ee 'Qorshaha Masterka Gaadiidka' Samsun 'Dawladda Hoose ee Samsun Samsun waxay shaqo u bilawday shacabka, waxay sidoo kale khusaysaa aragtida dadweynaha. Degmooyinka, sahamiyayaal mas'uul ka ah sahamiyaha [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa inay hesho abaalmarino ku saabsan adeegyadeeda iyo maalgashigeeda. Abaalmarinta Heerka Sare ee Gaadiidka Dadweynaha Qeybta Tayada Kayseri Gaadiidka Dawlada Hoose ee Inc. helay abaalmarintii ugu horeysay. Sannadkan, 10. [More ...]
Ku adkaysiga telefishinka ee Magaaladda Sanliurfa
Duqa Magaalada Karaosmanoglu: a Waxaa lagu soo dhejin doonaa Istanbul oo leh Metro Kara
Karaosmanoğlu wuxuu yidhi, de Waxaan mashruuc metro ku leennahay Darica, Gebze iyo OIZs. Waxaan ka bilaabi doonnaa mashruuca mitirkayaga Darica. Munaasabaddan, waxaa lagu dhex geyn doonaa Istanbul gaadiid. ” Ibraahim Karaosmanoglu, Duqa Magaalada Kocaeli Magaalo Weyn, [More ...]
Degmada İlkadım ee Samsun Cumhuriyet Square Station 11.00 sano jir ah MK Tekkeköy-Ondokuz Mayıs University (OMÜ) dhacdada ka dhacday dhacdada 68 ayaa ka booday taraamka. Rakaabka qaadaya taraamka socda [More ...]
CHP Samsun kuxigeenka Hayati Tekin Guddiga Miisaaniyadda ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta iyadoo ay ka wada hadlayeen Wasiirka Arslan Samsun wadooyinka iyo mashruuca tareenka xawaare dheer la weydiiyay. Guddiga Qorsheynta Miisaaniyadda [More ...]
Xisbiga Dadka Jamhuuriga (CHP) Kayseri ku xigeenka Cetin Arik, Kayseri waxay sugeysaa tareenka xawaare sare ku maraya arrimaha Gaadiidka, Wasiirka Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa weydiiyay. Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka (AKP) ee uu xukumay Kayseri [More ...]
Safiirka Ukraine u booqda Kardemir
Safaaradda Ukraine ee Ankara iyo Eurasian Studies Center (Cawiim) 's taageero University Karabük ku marti ah "xiriirka diblomaasiyadeed Turkey-Ukraine ee 25. Andrii Sybıha, danjiraha Ukraine ee Ankara, oo u yimid Karabük si uu uga soo qeyb galo Dood-Sanadeedka iyo [More ...]
Dhibaatooyinka ku soo food leh gaadiidka dadweynaha ee Bursa si xad dhaaf ah ayey u korayaan Kaliya maahan khadka metrooga, laakiin sidoo kale basaska sababta oo ah qorshaynta oo aan ku filneyn iyo maalgelin si ay u casilaan muwaadiniinta ku khasbay inay dib u soo celiyaan kalluunka. Gaadiid kasta oo maraya Bursa [More ...]
Kuxigeenka CHP Niğde iyo Wakiilka Kit ee Ömer Fethi Gürer ayaa aasaaska u dhigay 1995, oo loo ballan qaaday kahor doorashada kasta iyo in kastoo sanado ay ka soo gudbeen [More ...]
Independent warshadlaydu 'iyo Association (MUSIAD) Guddoomiyaha raxmaan Kaan, mashruuca gaariga gudaha Ganacsatada iyo Turkey tirokoobka machadka (TSI), oo laga helay oo ku saabsan xogta sicir bararka October sii daayay by qiimaynta. Locomotive in dhoofinta [More ...]
3. Maddaarka ayaa soo ururiyay abaalmarin kahor intaan la furin
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa hadalo ka jeediyay maddaarka cusub. Gegada diyaaradaha ee cusub ee magaalada Istanbul, oo dhismihiisu socdo, ayaa noqotay cinwaanka abaalmarinta kahor intaan la furin. Wasiirka ayaa sheegay inuu helay abaalmarino kahor intuusan furin. [More ...]